Lohahevitra 100 amin'ny andro ho an'ny 2020 - Pedia Quotes
104 isa sy teny nolazainy
Isika rehetra dia manantena ny hanomboka-manomboka ny androntsika amin'ny fomba hafa na hafa. Isika rehetra dia mitaky ny fanosehana kely hiverina amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa mifoha amin'ny maraina.
Maro amintsika no mety hahatsapa ho diso fanantenana noho ny habetsaky ny asa izay mahazo antsika. Amin'ny toe-javatra toy izany, dia vitsy sivily ny andro afaka manampy be.
Ireo teny nindramina ireo dia mety ho angonina iray miresaka momba ny elanelam-piainana samihafa ary mety hanome aingam-panahy anao amin'ny fomba izay tsy noeritreretinao.
Fomba iray tena tsara Quote dia hoe izy ireo no mahay manazava ary mora azonareo an-tsaina. Saingy mila mandany fotoana kely hieritreretana azy ianao mba hanimbana tanteraka ny dikany marina, mba hahafahanao mihetsika araka izany.
Raha tena manadino azy ianao dia ho tsaroanao mandritra ny fotoana maharitra ary ho afaka hampihatra izany amin'ny tena fiainana amim-pahavitrihana.
Raha mieritreritra ianao fa mety hanadino ny zavatra novakianao ary tena tianao, dia tsara kokoa ny manamarika izany any amin'ny toerana iray ary manaova rakitra ho azy.
Rehefa mandeha ny fotoana, dia ho azonao fa lasa be sarobidy aminao io famoriam-bola io. Teny isan-karazany afaka manome anao fomba fijery hafa ary mety hanimba ny fomba fisainanao mahazatra.
Ny mety tsy ho fantatrao dia ny hoe ireto teny ireto dia zavatra azonao ianteherana ary ho eo foana izy ireo. Tsy mila miankina amin'ny olon-kafa na amin'ny fotoanany mihitsy ianao.
Ny olanao irery ihany no azonao atao ny mandamina ny olanao mamaky ireto teny ireto.
Mahatonga anao hatoky tena kokoa izany ary manome fahazotoana hahavita bebe kokoa rehefa fantatrao fa tsy miankina amin'ny olon-kafa rehetra ianao amin'ny famahana ny olanao.
Ny eritreritra kely kely isa-maraina dia afaka manova ny andro iray manontolo. - Dalai Lama
Ny fitaomam-panahy dia mety hitranga na aiza na aiza! Mety ho fahitana tsotsotra izany, olona iray na vitsy aza ny teny…
Mety tojo faharesena maro isika nefa tsy tokony ho resy. - Maya Angelou
Mety tsy nahomby ianao tamin'ny fotoana iray na hafa tamin'ny fiainanao. Mety ho tapaka sy rava ianao…
Tsy mijanona famantarana ireo olany, torolàlana izy ireo. - Robert H. Schuller
Rehefa manome voasarimakirana ny fiainana dia manaova voasarimakirana ho anao. Tadiavo foana izay olana rehetra alehanao amin'ny…
Raha tsy tia ny tenanao ianao dia manenjika olona tsy tia anao foana. - Mandy Hale
Tokony ho fantatrao fa ny fahasambarana no zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanao. Raha tsy faly ianao…
Raha te handresy ny tahotra ianao dia aza mipetraka ao an-trano ary mieritreritra izany. Mivoaha ary manahirana. - Dale Carnegie
Tsy maninona na iza ilay olona mahery fo, dia matahotra daholo isika rehetra. Mety ho avy amin'ny…
Tsy afaka milomano amin'ny faravodilanitra vaovao ianao mandra-pahasalama anao ny morontsiraka. - William Faulkner
Isika rehetra dia tia ny hijanona ao amin'ny faritra mampionona. Na izany aza, raha tsy mivoaka avy amin'ny fampiononana izahay…
Tsy mila mahita ny tohatra iray ianao, ento ny dingana voalohany. - Martin Luther King, Jr.
Samy manahy ny ho avy isika rehetra satria tsy fantatsika hoe ahoana no ho avy…
Aoka ho fanovana tianao ho hita eto amin'izao tontolo izao. - Mahatma Gandhi
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny fahasamihafana fa ny hany zavatra tsy miova ihany. Handeha izahay…
Aoka ho zava-misy ianao, manantena fahagagana. - Osho
Mandritra ny androm-piainantsika dia miatrika toe-javatra samihafa isika. Ny sasany dia mazàna ary andrasana mandritra ny hafa izay mandray…
Mahazo izay omenao ianao. - Jennifer Lopez
Ny fiainantsika dia manaraka ny teoria misy fifanakalozana. Ary noho izany antony izany, na inona na inona hataonao, dia hahazo…
Manan-tsofina roa sy vava iray ianao. Araho io lafiny io. Mihainoa bebe kokoa, miresaka kely. - Tsy fantatra
Ny ankamaroan'ny fifandirana eto amin'izao tontolo izao dia noho ny tsy fitovian-kevitra. Matetika isika dia tokony hifantoka bebe kokoa amin'izay tadiavintsika…
Mitranga ny zavatra mahafinaritra rehefa manalavitra ny tenanao ianao. - Anonyme
Manantena antsika hatrany ny fanantenana sy ny fahatokisana, manome hery sy herim-po hiatrehana zava-tsarotra isika satria isika…
Ny toko ratsy iray dia tsy midika hoe tapitra ny tantaranao. - Anonyme
Tokony ho tsaroantsika fa ny fiainana dia haingam-pandeha mitaingina roller, ary miakatra hatrany ny fiakarana.…
Tsy afaka miampita ny ranomasina ianao amin'ny alàlan'ny mitsangana sy mijery ny rano fotsiny. - Rabindranath Tagore
Indray andro any, hipoitra ny fiainanao eo imasonao. Ataovy azo antoka fa dinihina tsara. - Gerard Way
Aza avela handresy lahatra anao ny saina kely fa lehibe ny nofinao. - Anonyme
Isaky ny mikasa hahavita zavatra ianao dia ho hitanao fa be dia be ny olona…
Atsangano ny teninao fa tsy ny feonao. Avy ny orana izay maniry voninkazo fa tsy kotroka. - Rumi
Ny safidy tsara indrindra indrindra hanatsarana ny teninao fa tsy mampiaka-peo na inona na inona. Ianao ...